Siyaabaha wax loo bixiyo - El Centro de la Raza
Siyaabaha Loo Weydiiyo
El Centro de la Raza waxay u jirtaa bulshada xiisaha badan oo ay u adeegto. Mutadawiciinteenna xiisaha leh iyo deeq -bixiyeyaasha deeqsinimada leh ayaa naga caawiya inaan sii wadno dhismaha bulshadeenna aan aadka u jecel nahay.
samee a ku -deeqidda onlayn adiga oo gujinaya halkan.
Qaar badan oo ka mid ah mutadawiciinteena ayaa ka bilaabay barnaamijyada carruurteena waxayna u soo noqdeen si ay u caawiyaan jiil cusub, qaar badan oo ka mid ah deeq -bixiyeyaasheena ayaa dib u bixiya maxaa yeelay waxay hore uga faa'iideysteen kaalmada El Centro de la Raza.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad wax badan ka ogaato El Centro de la Raza, cidda aan nahay, iyo waxa aan sameyno, markaa waxaan jeclaan lahayn inaad nagu soo biirto Café con El Centro. Waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa dhammaan tabarucaadka iyo hadiyadaha ka yimid Liiskeena Wish. Waad ku mahadsan tahay inaad naga caawisay inaan gaarno yoolalkeenna!